गुरूत्वबोध ! गुरू गरिमापूर्ण ! गुरू महिमावान् ! गुरू आफैमा एउटा आश्चर्यको आत्मबोधको प्रतीक ।
अब म एकदम ठीक छु
झरेको फूलभन्दा पनि हलुका भएको छु
रुवाको त्यान्द्रोभन्दा पनि हलुका भएको छु
तिमी किन त्यसरी रोयौ ?
मन कति दुखेको होला
चोट कति गढेको होला
तिमीले देखेनौ र ?
हावाको त्यो झोँका
जुन तिम्रो बिलौनाले टुक्रा टुक्रा हुँदै थिए
जुन तिम्रो प्रलापले
कण कण बन्दै थिए
म त कण कण देख्छु
कण कणमा पस्छु ।
प्रिय अब त मौनरहु
मलाई माया गर्ने हे मनहरू
अब त चुप लाग
तिमी आफ्नो रुवाइलाई बुध्दत्वमा बदल
तिमी आफ्नो शक्तिलाई बौध्दिकतामा बदल
तिमी आफ्नो ऊर्जालाई कवित्वमा बदल
म अहिले एकदम ठीक छु
म अहिले विलकुल निष्फिक्री छु
यत्ति बेला एउटा शान्त पुनर्निर्माणको ध्यानमा छु
र यस बेला मलाई कुनै कुरोले घोच्दैन
कुनै सीयोले चुभ्दैन
शत्रु जम्जमाएर जुनसुकै हतियार बोकेर आए पनि
शत्रु फडफडाएर जुनसुकै कुरोको तीखो बाण लिएर आए पनि
धुवाँजस्तै उड्ने छन्
किनकि अब म त्यस्तो छैन
अब म लौकिक छैन
आकासजस्तै पारदर्शी बनिसकेको छु
पानीजस्तै पातलिइसकेको छु
प्रिय यदि मेरो हात हावाको हुन्थ्यो भने
प्रिय यदि मेरो हात वायुजस्तो हुन्थ्यो भने
तिम्रो आँसु अवश्य पुछ्थे
तिम्रो आँखामा चुम्मा खाएर
आँखाको छेद अवश्य बन्द गर्थे
प्रिय तर म धुलो भैसकेँ
हावाको झोँकाभन्दा पातलो भैसकेँ
ऐनाले समेत मेरो रूप समात्न सक्दैन
समुद्रले मात्र आकाश देखाइदिन्छ
मेरो रूप देखाउन सक्दैन ।
प्रिय तिमीले मलाई मृत ठान्यौ ?
प्रिय तिमीले मलाई जड ठान्यौ ?
वास्तवमै मरे तुल्य
तिम्रो लागि बेकारको लागेँ
कुनै घटना घटेन
कुनै दुर्घटना भएन
मात्र परिवर्तनको सानो अनुभव भए
अग्निपरीक्षा पार गरेजस्तो ।
हो, अब मलाई कुनै पीडा छैन
हो, अब मलाई कुनै दर्द छैन
अब मेरो मन पनि त दुख्दैन
मुटु राख्ने ठाउँ पनि त छैन
सबै उदाङ्ग, सबै निर्वाङ्ग
मेरा इन्द्रिय आजकल
जहाँ पुग्छ त्यहीँ रम्दछ
पात देख्दा म पातै बन्दछु
र पातकै सुस्केरामा डुब्दछु
फूलको समीप पुग्दा सुवास नै बनिदिन्छु
पानीमा पुग्दा पानी र आगोमा पुग्दा आगै बनिदिन्छु
अनेकौँ रङमा रङ्गिदा रङ्गिदै
मेरो यो हाल भो !
एउटा कणभन्दा मिहिन
एउटा वाफभन्दा हलुको
एउटा किरणभन्दा गतिमान
एउटा पानीको बूँदभन्दा पारदर्शी ।
हो, एक विन्दु जलको पनि आफ्नै अस्तित्व हुन्छ
सागरमा पुग्दा म सागरै बनेँ
आकाशमा पुग्दा म आकाशै बनेँ ।
प्रिय अब म ठीक भएँ
अब म स्वस्थ भएँ
तिम्रो यताउता बसेर रोएकाहरू
मेरो अरू थुप्रै वन्धु वान्धव पनि छन्
ओहो ! ती किन त्यसरी रोइरहेका ?
तिनको ममाथि के त्यत्रो प्रेम थियो ?
यो मलाई थाहा थिएन
तर जसले त्यति रुनु पर्थ्यो
ती रोएनन् ।
कुनै रोग छैन
कुनै भोक छैन
कसैको तिरस्कार छैन ।
​Weekly Literature पुनरावृत्ति
‘तेरो माथापच्चीमा केही विचारको, केही शब्दको पुनरावृत्ति छ नि ?’ मलाई एउटा विद्वान् अग्रजले भने ।
हो ! पुनरावृत्ति कहाँ छैन ? केमा छैन पुनरावृत्ति ? मैले मनमनै सोचेँ । ब्रह्माण्डको उत्पत्तिदेखि नै तारा, नक्षत्र र ग्रहहरु घुमेको घुमेकै छन् । सूर्यले ताप र किरण फालेको फालेकै छ । पिण्डहरु चक्कराएको चक्कराएकै छन् ।
रात दोहरिएको दोहरिएकै छ । दिन आएको आयै र गएको गयै छ । ब्रह्माण्डका यावत् तत्व क्षण क्षण रुपान्तर भई नै रहेकाछन् । वस्तुको बन्ने र नासिने क्रम न म रोक्न सक्छु न तपाईं रोक्न सक्नुहुन्छ । तत्व तत्वको जोडले प्रक्रिया र प्रक्रियाले तङ्खवलाई चलयमान बनाएको बनाएकै छ । मान्छेको जन्म र मृत्यु दुवै भोक्ता मान्छेको हातमा र वशमा छैन । अर्को कसैको भरले अर्को कोही जन्मन्छ र मर्छ । मान्छे अर्को वा अरुलाई बन्देज लगाउने प्रयास गर्नसक्छ वा गर्नपुग्छ तर उसको आफ्नो गति र जीवन उसको भरले मात्र चल्दैन । पानी– खोलो, समुद्र, बादल बनेर झरेको झरेकै छ । माटो चट्टान र चट्टान माटोमा परिणत भएको भयै छ । कहाँ छैन पुनरावृत्ति ? केमा छैन पुनरावृत्ति ?
जीव जन्मेको जन्म्यै र मरेको म¥यै छ । रुखले बीज र बीजले रुख बनाएको बनाएकै छ । अन्डाबाट कुखुरा र कुखुराबाट अन्डा बनेको बनेकै छ । मान्छेले मान्छे र बाँदरले बाँदर जन्माएको जन्माएकै छ । श्रीमान् फुत्त कुनै नयाँ बाँदर वा मान्छे, कुखुरो वा हात्ती किन नजन्मिएका होलान्, नझरेका होलान् यसतर्फ सोच्नु भएको छ ? कुकुरले कुकुर वा भँगेरोले भँगेरा जन्माउनु पुनरावृत्ति हो कि होइन ? स्यालले स्याल नजन्माइ सृष्टि संरचनामा पुनः अर्को स्याल जन्मेको इतिहास कहीँ कतै पढ्नुभएको छ के ?
धान उम्रेको उम्रै छ–चामल हामीले खाएको खायै छ । एकपल्ट यसो नजर फिराउनोस् त ! धान, मकै, गहुँ वा कुनै खाद्य एकपल्ट मात्र जन्मेका भए यो संसार कस्तो हुँदो हो ? मान्छे वा जीवको जीवन कस्तो हुँदो हो ? पुर्खाले यो खा त्यो नखा भनेर तोकिदिँदा त तपाई झुक्केर वा हेपेर कतिपल्ट रूग्ण बन्नुभएको छ र तपाईं जस्तै कति हठीहरुले मर्नु परेको छ समयभन्दा पहिले । नित्य नयाँ भए तपाईंको हालत के पो होला ? महाशय के तपाईं आफै मान्छेले मान्छे जन्माउने पुनरावृत्तिको अंश होइन र ? मान्छेले आज गर्व गर्न पाएका यावत् भौतिक वा आध्यात्मिक संरचना, वस्तु वा भाव, सबै सबै स्वास्थ वा विज्ञानका उपलब्धिहरु पुनरावृत्तिकै जोड र कारण होइन र ? यदि मान्छेले मान्छे मात्र अर्थात् चेतनाले चेतना नफैलाएको भए आजको तपाईको सोच पनि विकास हुन्नथ्यो कि ? पृथ्वीका अझै भनौँ ब्रह्माण्डका प्रत्येक तत्व एकपल्ट मात्र हुने थिए–सधैँ नयाँ सबै नयाँ, यावत् मूर्ख र अन्यौलग्रस्त । यो ब्रह्माण्डमा कुन तत्व त्यस्तो छ जुन पुनरावृत्तिको फेरोमा परेको छैन ? अरुका आँखाले देखेका सबै नयाँमा म मात्र देख्छु पुनरावृत्ति । त्यसैले श्रीमान् मलाई प्यारो लाग्छ पुनरावृत्ति ।
मैले विनयजीको ‘माथापच्ची’ तीन पटक आवृत्ति गरेँ । आफ्नो कमजोर बौद्धिकताको मदानीले जति मच्दा पनि मोही र नौनी अलग्याउन मैले सकिनँ । मोहीको साथमा नौनी, नौनीको साथमा मोही आएर हैरान पारिरह्यो । त्यसैले हातमा लागेको चिल्लोलाई निचोरेर आफे बुझेका दुई-चार कुराहरु यहाँ राख्दै छु ।
विनयकुमार शर्मा नेपालको विनयशील प्रज्ञाभित्र उद्भट बैद्धिकता तार्किकता र मनोहारिताले छताछुल्ल भएको निबन्धकार व्यक्तित्व छ भन्ने मलाई थाहा थिएन । ‘माथापच्ची’ निबन्धसङ्ग्रहको विमोचन २०७० साल माघ ११ गते ललितपुर वारएसोसिएसनको सभा कक्षमा विमोचन भएपछि जब मेरा हातमा यो सङ्ग्रह आइपुग्यो तब यसलाई ओल्टाइपल्टाई गरेर यसको अध्ययन गर्न थालेँ । यसपछि मात्र थाहा पाएँ नेपाल नेपाली निबन्ध परम्परामा एउटा छुट्टै पहिचानको स्मारक रहेछन् ।
विनजीले यहाँ माथापच्चीमा मानवीय अनन्त चैतन्यको अक्षयकोष खोतल्ने प्रयत्न गरेका छन् । रज र शुक्रको मिलनमा शुक्र शुक्रका बिचमा समेत सङ्घर्ष देख्दै गर्भदेखि नै आरम्भ भएको माथापच्चीकै कारण मान्छे ज्ञान र विज्ञानको चरम उन्नतिमा पुगेको छ । सृष्टि र विनाश दुवै ‘माथापच्ची’ बाटै भएको हो भन्ने ठहर नेपालको रहेको छ । ठीक बेठीकको सिद्धान्त जन्माउने पनि माथापच्ची । मान्छेलाई सत्य असत्य जस्तो कार्य गराउने पनि माथापच्ची भन्दै निबन्धकारले मानवीय अनन्त चैतन्यकै बारेमा व्याख्या विश्लेषण गरेका छन्— “प्रश्नमा पनि माथापच्ची उत्तरमा पनि माथापच्ची ज्ञानमा पनि माथापच्ची, विज्ञानमा पनि माथापच्ची, लिनुमा पनि माथापच्ची, दिनुमा पनि माथापच्ची, हाँस्नुमा पनि माथापच्ची, रूँनुमा पनि माथापच्ची, पाए सुरक्षाको माथापच्ची, गुमाए विशादको माथापच्ची, जन्मे प्रयोगको माथापच्ची, मरे दु:खको माथापच्ची त्यतिमात्र कहाँ हो र जन्मनुमा पनि माथापच्ची, जन्माउनुमा पनि माथापच्ची, लौ भन्नुहोस् त श्रीमान् श्रीमती कहाँ छैन माथापच्ची ?” (पृ.३८) ‘वादे-वादे जायते तङ्खवबोध’कै अर्थका रुपमा निबन्धकारले माथापच्चीलाई हेरेका छन् । मूलत: मानवीय चेतनाको अनन्त तहलाई कोट्याउने प्रयत्न गरिएको छ यस निबन्धमा । निबन्धकारले मानवीय चेतनाको गहिराइ छाम्नुपर्ने मान्यता यहाँ अघि सारेका छन् -“यो मान्छेको जन्म र मृत्युको बीचमा अरु थोक केही छैन कि के हो ? जहाँ-जहाँ जे-जे हुन्छ त्यहीँ त्यहीँ माथापच्ची ? प्रत्येक सोच, भाव, काम, वस्तु, तर्क, प्रेम, विवाद जताततै माथापच्ची नै माथापच्ची ? हुने गरिने भन्दा पहिले नै माथापच्चीको खेल सुरू भइहाल्ने, त्यसैले महोदय म कसैले पत्ता लगाउन नसकेको, कसैले छेउ पुच्छर समात्न नसकेको, कसैलाई नटेर्ने, कसैलाई नगन्ने माथापच्चीको प्रारम्भ र अन्त पत्तो लगाएर विश्वलाई नै चकित पारेर अर्को माथापच्ची गराउने धूनमा छु, हेरौँ ।” (पृ. ३९) सकस गरेर मानवीय मस्तिष्कको उद्भट व्यापकतालाई सबै दृष्टिबाट नापेर त्यसको सही निष्कर्ष निकाल्नका लागि निबन्धकार नेपालले बहस चलाएका छन् । यो उनको बौद्धिक चिन्तनको उल्लेख्य उपलब्धि हो । विनयकुमार शर्मा नेपालले आफबुद्धिपक्षको वकालत गर्ने निबन्धकार हुँ भन्ने प्रमाण ‘माथापच्ची’ निबन्धसङ्ग्रहद्वारा नजिर पेश गरेका छन् । उनले तुलनात्मक निबन्धको परम्परा जन्माउने प्रयत्न गरेको छु भन्ने दाबी गरेका छन् - “तुलनात्मक निबन्धको प्रयोग विश्वसाहित्यभै कम छ । तर्क र प्रमाण प्रश्न र उत्तर तुलनात्मक निबन्धका प्रमुख बिन्दु हुन् । विश्वका अन्य भाषामा लेखिएका निबन्धहरुमा तुलनात्मक निबन्ध लेखिए वा लेखिएनन् ? यो खोज्नेले खोज्लान् नै ................ ।
प्रा. डा. कृष्णप्रसाद दाहाल
नाक वरिष्ठ कि कान वरिष्ठ ? हात वरिष्ठ कि खुट्टो वरिष्ठ ? मुटु वरिष्ठ कि दिमाग वरिष्ठ ? मुख वरिष्ठ कि चाक वरिष्ठ ? के यिनमा कुनै एकलाई मात्र वरिष्ठ मान्न सक्छौँ हामी ? रातो वरिष्ठ कि नीलो वरिष्ठ ? कालो वरिष्ठ कि सेतो वरिष्ठ ? पहेँलो वरिष्ठ कि हरियो वरिष्ठ ? कुनलाई हामी प्रकृतिबाट फेँक्न सक्छौ ? ज्ञान वरिष्ठ कि विज्ञान वरिष्ठ ? जीव वरिष्ठ कि जगत् वरिष्ठ ? न विज्ञान विना ज्ञान जन्मन्छ न ज्ञान विना विज्ञान खुल्छ । न जगत् विना जीव हुन्छ न जीवविना जगत् को सार हुन्छ । यी सबै परस्पर अविछिन्न छन् । यो संसारमा विछिन्न केही छैन, कुनै तत्त्व छैन । सिङ्गो ब्रह्माण्डमा यावत तत्त्व–तत्त्वको परस्पर सम्बन्ध छ– मिलाप छ, चाहे त्यो हामी देखौँ वा नदेखौँ फेरि कुन कनिष्ठ ? एकको अन्त अर्काको अन्त, एकको जन्म अर्काको जन्म अर्थात् एकको अन्त अर्काको जन्म, एकको जन्म अर्काको अन्त । मात्र रुपान्तरको सृष्टि संरचना भित्र को वरिष्ठ को कनिष्ट ? मान्छेमा आजकल होडबाजी छ म ठूलो कि– तँ ठूलो ? म जान्ने कि तँ जान्ने ? प्रकृतिमा कुनै होडबाजी छैन, कुनै हतारो छैन, कुनै सुस्तता छैन तर मान्छे मूर्ख ! कुदिरहन्छ, दौडिरहन्छ, उफ्रिरहन्छ । म श्रेष्ठ, बाँकी सबै अश्रेष्ठ । म जान्ने बाँकी सबै नजान्ने । म बलियो, बाँकी सबै निर्बलियो । म ज्ञानी बाँकी सबै अज्ञानी । मान्छे हरेक क्षेत्रमा आफूलाई ‘सुपरियर’ सबैभन्दा श्रेष्ठ ठानेर आफू घमण्ड वा हीनतामा डुबिरहन चाहन्छ तर मलाई लाग्छ एउटा मान्छेको अस्तित्व यो प्रकृतिको लागि एक गेडो धान–मकै–गहँु भन्दा भिन्न छैन । एउटा फूल, कोपिला र बीजभन्दा ठूलो छैन । एउटा पदार्थ र शक्तिभन्दा महत्त्वको छैन । फेरि को वरिष्ठ ? को कनिष्ठ ? अब भन्नोस् कलाकार वरिष्ठ कि साहित्यकार वरिष्ठ ? वैज्ञानिक वरिष्ठ कि दार्शनिक वरिष्ठ ? आगो वरिष्ठ कि पानी वरिष्ठ ? नारी वरिष्ठ कि पुरूष वरिष्ठ ? बीज वरिष्ठ कि जीव वरिष्ठ ? कसको महत्त्व कसको भन्दा कम छ ? एउटा हात्ती र भुसुनो प्रकृतिको लागि वरावर ! समान ।
आजकल सबै क्षेत्रमा वरिष्ठको लेवल टाँस्ने होडबाजी चलेको छ । वरिष्ठ शब्दको प्रयोग राम्रो कुरो हो तापनि प्रयोगभित्र सदुपयोग र दुरूपयोग टाँसिएको छ । यो प्रश्न एकातिर छ भने अर्कोतिर साहित्यकार वरिष्ठ कि कलाकार वरिष्ठ ? चित्रकार वरिष्ठ कि मूर्तिकार वरिष्ठ ? शिल्पकार वरिष्ठ कि दृश्यकार वरिष्ठ ? यसको खिचातानी आफ्नै छ । अझै हेर्दा स्रष्टा वरिष्ठ कि सिर्जना वरिष्ठ ? कला वरिष्ठ कि कलाकार वरिष्ठ ? यो वरिष्ठ र कनिष्ठ मापनको होडबाजी किन, कसले, के को लागि गरिरहेछन् पाठकले खुट्ट्याउनै पर्छ ।
कुनै समय थियो, हाम्रा पूर्वजले युद्ध गर्नै पर्ने भएमा समेत धर्म युद्ध गर्दथे । युद्ध त युद्धै हो तर पनि युद्धमा समेत नियम हुन्थे, अनुशासन हुन्थे, आचार र विचार चल्थे । युद्धमा समेत नैतिकताको जुहारी चल्थे । युद्ध त युद्धै हो नि तर रामायण वा महाभारत कालका युद्धमा समेत शिष्टता थिए । युद्धमा अनुशासन तोड्ने होइन बरु नियमपालन गर्ने कुराको होड चल्थे । युद्धका आफ्नै चरित्र हुन्थे, आफ्नै नियम बाँधिन्थे, आफ्नै सीमा निर्धारण हुन्थे । युद्धमा विधि–नियम–आचार बाहिर जानेलाई दण्ड–सजायको त के कुरा र ? नियम–विधिमा नहिँड्ने नचल्ने युद्धनायक नै हुन्न थियो किनकि मान्छेको चेतन धरातलमा कर्तव्य र अधिकारको राम्रो ख्याल थियो । युद्ध त हुन्थ्यो – युद्धमा विश्राम पनि हुन्थ्यो, सूर्यास्तपछि युद्ध बन्द गरिन्थ्योे र सूर्योदयपछि युद्ध आरम्भ हुन्थ्यो तर आज जसले जसलाई हान्न– ढाल्न–झोस्न परेमा निशाचरझैँ रातको समय उपयोग गरिन्छ । लुकेर घातपूर्वक बदमासी गर्न सिकाएको छ मान्छेलाई आफैँले बनाएको परिस्थितिले । कोही दुर्योधनजस्ता पनि जन्मन्थे र नियम विधिलाई ताकमा राख्न खोज्थे तर